Mai Chibwe VekwaZimuto: Mitemo yenyika pakurhojana kwevanhu
Mitemo yenyika pakurhojana kwevanhu
Kune mitemo yakawanda yatinofanira kuziva panyaya dzokurhojna kwevanhu. Mitemo iyi yakaitigwa kuti umwe noumwe munhu ahwe akasununguka pane zvaari kuita. Mitemo yakawanda panyaya idzi inosungisa varume kupfuura vakadzi. Izvi zvakabva pakuti kare vakadzi vaingobatwa zvisina kufanira votozoita zvokuchengetwa utano hwavo nehazvanzi kana vana baba vavo kuti vaya vavabata varangwe. Zvaizoonekwa kuti paiita hondo pkati pemhuri zvichibva pakuti vasikana vemhuri vabatwa sei. Kwaitizve kana wawanikwa, murume akakurova, waikwanisa kunotaurira hama dzako dzouya dorova murume wako, kumudidzisa kuti kwawakabva kune vanhu.
Mazuvano nyika zhinji dakaisa mitemo yokuti ukaidarika unokwanisa kusungwa. Mutemo mukuru ndewekubata mukadzi chibharo. Chibharo chinonetsa varume vakawanda kuchiwhisisa. Munyika dzakawanda kubata mukadzi chibharo zvinoreva kuti
Kumanikidza mukadzi iye asingadi.
Kuti murume apinza chombo mukadzi omuudza kuti haachadi iye oramba achiita.
Kubvisa bhurugwa nokupinza chombo kumukadzi asingazivi kuti ndizvo zvauri kuita, toti akadhakwa kana kuti amwa mushonga, kana kuti wangomuwana avete asiri mukadzi wako. Kana uchitengera munhukadzi doro musi wamasangana, hwisisa kuti kana akaenda newe kumba kwako, adhakwa, zviri nani usavata naye.
Kuvata nomusikana ane makore ari pasi pemakore emukadzi mukuru. Iyi inyaya inonetsa nokuti mutemo uyu wakasiyana munyika dzakasiyana. Mu UK kune makore akasiyanazve pzviri. Kunoti kana uri musikana wechidiki unofanira kuva nemakore 16 usati wavata nomurume wechidiki ane makore ari pasi pe 20. Kana wada murume ati kurei unofanira kuva nemakore 18.
Kuvata nomunhu ari pasi pako pabasa zvinokwanisa kuhi wabata chibharo. Hazvibvumigwi pakawana.
Kufosa umwe munhu, murume kana mukadzi kuti akumwe chombo
Kupinza chinhu chisiri chombo mune umwe munhu iye asingadi.
Zvokuita wabatwa chibharo
Kana wabatwa chibharo nomunhurume akakupinza chombo asina kondhomu, usageza usati waonekwa nemapurisa. Mapurisa akasvika pawabatigwa chibharo, vanoda kurora urume kubva muchitubu chako voendesa kunotesitwa kuti ndohwani. Murume anokwanisa kuudza mapurisa kuti wange wamuudza kuti unoda kuvata naye. Pakudaro atobvuma kuti mavata mese zvinoreva kuti chasara kungoti wange wabvuma here kana kwete. Kana pamberi pako pachiratidza kuti wapinzwa neganyabvu murume anoenda kujeri. Kana pachiratidza kuti mavata mese zvisina ganyabvu, vanotarisa kuti wambomaranzura murume here kutaridza kuti haudi, wambochema here kana kuridza mhere? Kana mapurisa akawana banga kana chimwe chinokwanisa kushandiswa kushisidzira mukadzi chiri pamurume uyu kana mumota yake, murume anoenda kujeri.
Kana murume akubata chibharo ari murume wako, mapurisa haatsvaki zvakawanda. Vanongoziva kuti pane chanetsa kuti mukadzi adaro kumurume wake. Murume anosungwa.
Munhukadzi haafaniri kujaira kuva ega nomurume waasinganyatsi kuziva. Asi semagarire edu isu vatema tinokwidzwa mota nevanhurume pakufamba nzendo mopedzisira mangova vaviri mumota iyoyo. Varume havawhisisiki mafungire avo. Anokubhadharisa mota yake agodazve kukubata chibharo. Pamwe anouya kuzokugadzirira chimwe chinhu mumba opedzisira oda zvimwe.
Mu UK kana murume akahi abata chibharo kana kuti abata muviri wemukadzi asiri wake zvisina mvumo, haachabvumigwi kushanda mabasa akaita seeana DOCTOR, DENTIST, NURSE, TEACHER, CARER, COUNSELLOR, BUS DRIVER, kana rimwe basa rinoonekwa vanhu. Chinonetsa ndechokuti kana murume akapomegwa mhosva yaasina, chero akanotsukunugwa kukoti, zvinokwanisika kuti anodzingwa basa agotadzazve kuwana rimwe.
Kana uri munhurume, usajaira kuwanikwa uri panyaya yokuti munhukadzi anokwanisa kukuti wamubata chibharo. Usavata nomukadzi wawangosangana naye mubhawa kana CLUB. Usina kunyengana naye kwenguva.
Mu UK, zvokuti wabata munhukdzi chibharo ukashandisa kondomu hazvina zvazvinokubatsira. Zvinongotaridza kuti wange uchida kuvhara chakaipa chawaita.
Zvimwe zvinoitwa nevarume
Kune varume vanogara mumba mune gwaro rokuti akauya nomukadzi mumba otanga amuti kana achida kuvata naye ngaasaine. Izvi pamutemo wemu UK hazvishandi pakubatwa chibharo.
Chokutanga ndechokuti mukadzi anokwanisa kuudza mapurisa kuti akamanikidzwa kusaina. Chechipiri ndechokuti pamutemo mukadzi akaudza murume kuti haachadi kuiswa ivo vatomboita nguva vachiita, murume akaramba achiita, anosugwa nekubata chibharo.
Kubata munhukadzi zvisirizvo (sexual assalt)
Murume akabata mukadzi waasina bvumirano naye magaro, mazamu, kana imwe nhengo yomuviri wake anokwanisa kusungiswa otoenda kujeri. Nyaya iyi inonetsa pakuti zviri kumunhukadzi wacho kuenda kumapurisa kunovaudza kuti murume nhingi aita chokuti. Murume uyu anokwanisa kuramba kuti akazviita asi zvinonetsa nokuti pane vanhu vaviri apa. Mukadzi ari kuti murume akaita asi murume ari kuti haana chaakaita. Nengari yokuti varume vakawanda vanoreva nhema, ukaenda kukoti nenyaya yakadai kazhinji koti inoti mukadzi ari kutaura chokwadi.
Hapana chinhu chingaratidza kuti wabatwa zamu saka kuudza mapurisa zvinoreva kuti unoda kuti vaterere zvawataura vagobvuma kuti zvaitika. Pakadai zvinobva nenyika yauri uye ganda romuviri wako. Kana uri munhu mutema mukadzi akuendesa kumapurisa ari murungu unokwanisa kutosungwa chero wazviita chero usina. Izvi zvinobva pakuti vakawanda vechitema ndivo vanofarira zvechibharo. Ukatarisa STATISTICS yezvechibharo mu UK wokombeya nevanhu vemarudzi akasiyana siyana, uchaona kuti varume vasingazezi kubata vakadzi chibharo ndeveku MIDDLE EAST neveku AFRICA. Iyi pamwe ingari yokuti kunyika dzavo murume anokwanisa kubata mukadzi chibharo pasina zvinoitika kwaari. Kwedu kuZimbabwe Chibharo hachibvumigwi asi vakadzi vakawanda vanongobatwa chibharo pasina zvinoitika kuvarume vanodaro.
Kune dzimwe nyika kune mitemo miviri yokuchengetedza vana. Kunoti mutemo unohi AGE OF CONSENT kureva makore emusikana okuti musikana ahi akura zvokuti anokwanisa kuzvisarudzira kuti ovate nomurume here kana kwete. Kozotizve makore okuti vabereki vake vakamubatsira kusarudza. Toti musikana aita mukomana wake waanoda kuroorana naye asi makore ake ari pasi pe AOC. Pane nyika dzine mutemo wekuti vabereki vakati ngaaroogwe anokwanisa kuroogwa makore ake asina kukwana. Kwedu kuZimbabwe zvaimbobvumigwa kuti musikana ane makore 12 awanikwe kana vabereki vabvuma. Kuti azvisarudzire aifanira kuva nemakore 16. Mazuvano kwangosara 16. Kana uri murume, ukavata nemusikana ane makore ari pasi peawa, unosungwa.
Kana uchigara munyika isiri yako, verenga kuti mitemo yavo yakamira sei usati watanga kuvata nevanhukadzi vemo.
Pamutemo musikana akaudza mukomana kuti ane makore 18 iye ane 15. Mukomana akavata naye anosungwa chete. Chero vakazoroorana mukomana anongohi ane Criminal Record chete.
Kana ukasangana nemukomana akambobata munhukadzi chibharo ukazviziva, kasira kumusiya akadaro nokuti uchabatwa chibharo iwe pasina kupera nguva. Varume vanobata chibharo vane chigwere chefungwa chisingarapiki. Usazviudza nhema kuti kana achiwana rhoji yakakwana kumba haaiti zvechibharo izvi. Vakawanda vanongoramba vachiita chete. Kungoti zvimwe hazviudzwi mapurisa nokuti vakadzi vakawanda havadi kuzikamwa kuti vakabatwa chibharo.
Zvinofanira kuhwisiswa nevarume.
Chokutanga ndechokuti mupasi rese mune vanhu vanoti vakadzi 52% varume 48%. Pavarume vashoma ava, kunohi ngochani dzinoita 11% yevarume, ngochanikadzi dzichiita 8% yevakadzi. Izvi zvinoreva kuti kune vakadzi vakawanda kupffura varume zvinoreva kuti kune vakadzi vasingakwanisi kuwana varume. Saka totarisa varume vanoita mhosva idzi tinoona kuti hazviitiswi nokushaya mukadzi asi kuti pane chimwe chinoitisa zvakadai.
Asizve kana uri murume muChina unofanira kuziva kuti varume munyika iyi vakawanda kupfuura vakadzi, iri nyaya yokuti vanobvumigwa mwana umwe chete saka vakaita mwanasikana kazhinji vanouraya vachida mwanakomana. Mu Greenland varume vakawanda kupfuura vakadzi. Mu India hurumende yeko iri kuzama kuti vanasikana vasauraiwa sezvavari kuita mazuvano. Kunohizve zvinonetsa kuwana musikana muIndia ndosaka iri nyika yechibharo.
South Africa nenyika dzoku South America Chibharo inhamo huru.
Kune nyika dzisingabvumidzi zvoungochani zvokuti ukabatwa kuti wange uchivata nomunhurume iwe uri murume, kana kuti mukadzi iwe uri mukadzi, unokwanisa kusungwa chero munhu wacho ava munhu mukuru uye mawirirana kuvatana pachenyu. Kune nyika dzisingazvibvumiri, zvikuru kuAfrica nokunyika dzechi ARABHU. Muzuvano zvonetsa nyika idzi nokuti zvikahwikwa nenyika dzinovapa zvipo zvemari, zvipo zviya zvinomiswa. Nyika dzinopa zvipo dzinoti idzo regai vanhu vanoda kurhojana varhojane madire avo chero vari vakadzi vese, varume vese, kana mukadzi nomurume. Kana vasingakuvadzani hazvinei nehurumende.
Kwedu ku Zimbabwe vatongi vanonyebera kuti hazvibvumigwi asi gore rimwe nerimwe ngochani dzinoita gungano radzo muHarare chaimo dzoimba nziyo dzichifamba mumaSTREET eguta iri pasina anombosungwa achibvunzwa kuti akambovata nani. Izvi zvinoreva kuti mitemo yenyika panyaya iyi haina ane basa nayo. zvinotozikamwa kuti vamwe vakuru muhurumende yedu vanoita zvechingochani pasina anombovasunga. Asi zvadaro mitemo yenyika inoti chingochani hachibvumigwi. Kuti usungwe unofanira kunge waita zvimwe zvinowedzera kusungiswa kwako, sokuti uri ngochani wobata chikomana chidiki chibharo.
Kana uri kunyika dzechi Arabhu ukabatwa uchivata nomurume iwe uri murume, kana mukadzi iwe uri mukadzi, unokwanisa kuurawa, nokuti vanotevedzera zviri mumabhuku avo e Islam ya Mohamedhi kuti waita izvi ngaaurawe.
Kana wabatwa munyika ye IRAN, vanokusunga iwe neumwe wako, vokutii musarudze kuti anoda kuitwa operation pakati enyu ndeupi kana muri varume, Umwe wenyu wochekwa chombo woiswa bhuri kuti aite mukadzi. Zvadaro morhojana sezvinoita mukadzi nomurume asi imi makazvagwa muri varume mese. Kufunga kwavo vanoti murume anofongorera umwe murume zvinoreva kuti chombo chake haana basa nacho saka ngachibve aite mukadzi.
Kubata mhuka chibharo
Toti wawanikidzwa uchirhojana nemhuka yakaita sembwa, mombe, dhongi, bhiza, gwai, mbudzi, mutemo unoti mhuka haikwanisi kubvuma kuvata newe saka zvinohi waifosa. Zvadaro unokwanisa kuenda kujeri. Kune nyika dzechiARABHU vanotanga vatarisa mhuka yacho. Kana iwe uri murume ukabatwa une mhuka hadzi, zvinokuitira nyore pane kuti ukabatwa nemhukarume apo vanokuti uri ngochani, vokusungisa nomutemo wehungochani. Kana uri mukadzi hazvitombobvumigwi kuti uwanikwa uchirhojewa nemuka. Kuno kuEurope kune vanhukadzi vanodzidzsa imbwa dzavo kuvata navo. Hakuna munhu ati ambosungwa nenyaya iyi.
Kubatwa uchirhoja/rhojewa mukadzi/murume wemunhu
Nyaya yechihure inorambidzwa munyika dzakawanda. Kunyika dzine vanhu vakasvinura pakuipa kwekuhura unokwanisa kuurawa. Kana ukabatwa uri mumba memuridzi wemunhu wauri kuhurira, muridzi anokwanisa kukuuraya agoenda hake kujeri asi kwemakore maviri kana matatu. Kana wabatwa uchihura, ukawana mukana tiza hako wozosungwa uri mupenyu.
Vamwe mazuvano kwava nefoni dzine makamera, kana akubata uchirhojana nomurume/mukadzi wake anokasira kutora pikicha dzenyu makadaro zvokuti kana nyaya yenyu ikaenda kukoti, hazviiti kuti murambe.
Munhu anovata nomunhu waanoziva kuti ane murume/mukadzi, wemunhu anenge atozvipira kufa hake zvikuru kana vasingashandisi makondomu, asi kuurawa nomunhu waunoda kwakasiyana nokuurawa nomunhu anokuvenga.
Kana uchihwisisa ma STATISTICS kuti anorevei imbotarisa zvakanyogwa pa nyika ye United Kingdom mukupera kwegore ra 2009. Utarise kuti proportion yevatem munyika ugotarisa kuti proportion yavo mumajeri iri papi. Kana wahwisisa izvi wofunga kuti ukahi waita mhosva, ukaendeswa kukoti unonofamba sei ikoko.
Posted by Mai E Chibwe at 11:32
Kurambana mamboroorana (divorce)
Kusiyana pazera, murume nomukadzi
Kutorana mapikicha muchirhojana
Kudziya kwemuviri kunoderedzwa nei?
Zvinotarisigwa kana maroorana